ရွှေလီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ရွှေလီ ကို တရုတ်ဘာသာအားဖြင့် (simp.: 瑞丽市; trad.: 瑞麗市; Pinyin: Ruìlì Shì) ဟုခေါ်ဆိုပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ တယ်ဟုန်ခရိုင်အတွင်းရှိ ကောင်တီအဆင့်ရှိ မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မူဆယ်မြို့နှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ပြုလုပ်သော နယ်ခြားမြို့ ဖြစ်သည်။ ဧရိယာ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၀၂၀) (၃၉၃,၈ စတုရန်းမိုင်) ကျယ်ဝန်းသည်။
ကိုဩဒိနိတ်: 24°01′N 97°51′E﻿ / ﻿24.017°N 97.850°E﻿ / 24.017; 97.850
၁၀၂၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၃၉၀ စတုရန်းမိုင်)
၇၇၇ မီတာ (၂၅၄၉ ပေ)
၁၄၀/km၂ (၃၆၀/sq mi)
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောမြို့ ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ၏ ၆၄% မှာ တောင်ပေါ်နေတိုင်းရင်းသား (၅)မျိုးတို့ဖြစ်ကြသည်။ ရှမ်းလူမျိုး၊ ဂျိန်းဖော့လူမျိုး၊ ဒယ်အန်လူမျိုး၊ လီဆူးလူမျိုးနှင့် အာချန်လူမျိုးတို့ဖြစ်ကြသည်။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက် အရေးပါသော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သည်။ 
တရုတ် လူမျိုးနှင့် ရှမ်းလူမျိုးများသည် မြို့တွင်း ချိုင့်ဝှမ်းဒေသတွင် နေထိုင်ကြပြီး ဂျိန်းဖော့လူမျိုးနှင့်ပလောင် ဒဲအန်လူမျိုးတို့သည် မြို့ဆင်ခြေဖုံးဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ လူဦးရေ ၁၄၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။
↑ Yunnan’s Sin City, The Irrawaddy, January 2005
↑ Sex, Drugs and The Roll of Dice, Time Asia, September 27, 1999
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရွှေလီ&oldid=515470" မှ ရယူရန်
၁၆ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။